LA OGAADAY: Ciyaartoyga Ugu Horreeya Ee Mauricio Pochettino Uu Keeni Doono Manchester United Waxa Uu Ka Tirsan Yahay Real Madrid - Gool24.Net
LA OGAADAY: Ciyaartoyga Ugu Horreeya Ee Mauricio Pochettino Uu Keeni Doono Manchester United Waxa Uu Ka Tirsan Yahay Real Madrid
Manchester United ayaa lala xidhiidhinayaa inay tababare u magacaabo doonto macallinkii hore ee Tottenham ee Mauricio Pochetttino, kaas oo aan wax shaqo ah qabanin tan iyo markii ay Spurs ka caydhisay shaqada.
Pochettino ayaa Arbacadii la kulmay lataliyaha dhinaca sharciga ee guddoomiye ku-xigeenka Manchester United, Ed Woodward waxaanay wada daawadeen kulan ka tirsanaa horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska, halkaas oo ay waqti ku wada qaateen, hase yeeshee faahfaahin lagama helin waxyaabihii ay ka wada hadleen.
United oo hadda ku jirta kaalinta toddobaad ee horyaalka Premier League, waxay u muuqataa in Ole Gunnar Solskjaer aanuw aqtigan ka saari karin dhibaatada haysata, laakiin waxa taas sii dheer in xattaa ay hoos uga sii dhacayso halkii laga filayey oo ay sannadka dambena ka maqnaan doonto Champions League.
Afarta boos ee ugu horreeya waxa iska haysta, Liverpool, Manchester City, Leicester City iyo Chelsea, laakiin waxa Red Devils kasii dul-tallaabsaday usbuucii ugu dambeeyey Tottenham iyo Sheffield United oo boosaska shanaad iyo lixaad kala fadhida. Waxa kale oo sii dheer, United waxa khatar kale ku ah Wolves oo rabta inay booska toddobaad hoos uga sii tuurto.
Arrimahani waxay soo dedejinayaan in United ay shaqada ka caydhiso Solskjaer, haddii ay taasi dhacdana waxa murashaxa koowaad uu yahay Mauricio Pochettino.
Sida uu qoray wargeyska Don Balon ee kasoo baxa waddanka Spain, Pochettino lama dhacsana ciyaaryahannada Manchester United uga dheela baasha bidix ee difaaca, waxaanu bartilmaameedkiisa koowaad ka dhigan doonaa xiddiga reer Brazil ee Marcelo.
Wargeysku waxa uu tilmaamay in Marcelo oo ay da’diisu tahay 31 jir uu noqon doono saxeexa ugu horreeya ee Pochettino oo uu kursiga kaydka u diri doono Luke Shaw iyo Brandon Williams oo ah da’yar hadda soo baxay.
Arrintan oo walaac ku abuuraysa Real Madrid oo ay muuqato in laacibka reer Brazil aanu jeclaysanin sida uu Zinedine Zidane waqtiga u siinin xili ciyaareedkan ee uu uga door bido Medny, waxa uu wargeysku sheegayaa in uu ku fikirayo inuu eegto fursadda uu kaga bixi karayo Bernabeu oo uu ogolaan karo inuu u dhaqaaqo England.